हामी किन यति धेरै कमजोर भयौँ ? | रक्त न्युज
हामी किन यति धेरै कमजोर भयौँ ?
प्रा डा संग्राैला
जब रास्ट्र कम्जोर हुन्छ, त्यस्ले अनेकौं समस्याहरु भोग्न बाध्य हुन्छ, तर एउटा समस्या भने सबै भन्दा डरलाग्दो हुन्छ–त्यो हो, जनतामा अनुशासनको ठूलो अभाव हुन्छ। यो सन १९१२मा पेकिङ्ग बिश्वबिधालयका एक जना प्राध्यापककले भनेको भनाइ हो। त्यसबेलाको चीन अहिलेकोको नेपाल जस्तै थियो, झन्डै झन्डै । अनेकखालका बिदेशी एजेन्टहरु चिनमा अनेक किसिमका खेलहरु खेली रहेका थिए। जर्मनलाई हराएर जापानले चिनको सान्डोङ्ग प्रान्त आफ्नो हातमा पारेको थियो। क्रीस्चियन मिसनरीहरु गरिब चिनियाँलाई पैसा दिएर रिलिजन परिबर्तन गराइरहेका थिए। प्रथम बिश्वयुद्ध सकिएको थियो, र पेरिसमा शान्ती सम्मेलन हुँदा चिनियाँ प्रतिनिधीहरुले अपमानजनक सन्धिमा हस्ताक्षर गरे, जस्ले चीनमा आन्दोलनको आंधिहुरी निर्माण गर्यो, तेस्ले चीनमा देशवादको चेतना निर्माण गर्यो। अमेरीकाले चीनलाई सहयोगको आस्वासन दियो, तर गरेन। उस्को आफ्नै स्वार्थ थियो। तयसबेला एकजाना प्राध्यापकले भनेका थिए, संकट बाट रास्ट्रलाई बाहिर निकाल्न परम्पराबादी सोचले सक्तैन नयाँ बिचारको आवस्यक्ता पर्छ, तर त्यस्बेला चीनमा नयाँ बिचार थिएन। देश युद्ध सरदारहरुको अराजकतका मा थियो,र अधिकांश बुद्धिजिबि पनि अवसरबादी, अहिलेको नेपालमा जस्तै। नेपालको अवस्था अहिले तेसबेलाको चीनको अवस्था जस्तै छ।
३. औधोगीक क्रान्तिले मेसिनको प्रयोगबाट बस्तुहरु उत्पादन गर्न शुरु गर्‍यो। यसकालागि धन चाइन्थ्यो तब ब्रीटिस, फ्रान्स लगायतका साम्राज्यवादिहरु धन लुटने अभिष्ट बोकेर एसिया लगायतका देशमा पसे। असीमित धनलुटे। उता उनिहरुका गाउँबाट मानिस शहर पसे। उद्योगका मालिकले उनीहरुका आफनै गरिब मानिसको पनि चरम शोषण गरे।काम्दार पुगेनन त्यसैले दास ब्यापार शुरु गरे। लाखौं मानिसको हत्या गरे। अफ्रीकालाइ दास उत्पादन गर्ने भुमिमा परिणत गरे। नेपाल जस्तो सानो देश ब्रीटिस साम्राज्यवादको रक्षा गर्ने सिपाही उत्पादन गर्ने देशमा परिणत गरे। हाम्रो इतिहास र गौरव नस्ट गरिदिए। हामी अरुमाथी अत्याचार गर्ने साम्राज्यवादको रक्षा गर्ने खताला बन्यौं। गोर्खा रेजिमेन्टको नाममा “लाहुरे” संस्कृति निर्माण गरिदिए। नेपालमानकृषि उत्पादन गर्ने युवा ब्रीटिसका भाडाका सेना बनाइए। नेपालमा उपनिबेशको भौतिक अस्तित्व थिएन तर नेपालको जनसंख्या उपनिवेशमा परिणत भयो यसरि। तर यो कलंक समाप्त गर्ने शाशक देशले अहिले सम्म पाएन।
६. सन १९१२ मा चिनियाँ एक प्राध्यापकले भनेका थिए, “चीनको निर्माण गर्न एक बलियो दिमाग र बलियो दिमाग भएका बुद्धिजीवीको आवश्यकता छ। हामी इम्परियल मिसन र समृद्धि दुइधारमा छौँ। हामीले बिदेशीको हस्तक्षेप र लम्पट प्रवृत्ति समाप्त गर्नुपर्छ।” माहात्मा गान्धीले देशमा उत्पादन र उद्धम बढाउन चर्खा आन्दोलन गरे। भारत पनि धानी भयो, उस्ले कोरोना जांच गर्ने आफ्नो मसिन आफै बनायो। हामी सङ्ग न बिज्ञान छ न उन्नत संस्कृति। हामी सङ्ग त केबल गफ, ढाटीकला, बेइमानि र देश सराप्तै बिदेशीने मति मात्रै रहेछ। हामी बिदेशी लादेका रणनीतिक जोखिम बोक्न बाध्य छ। हाम्रा शासकहरुमा साम्राज्यका चाल बुझ्न पारख छैन। हाम्रो देशभक्ति ओइलाएको छ। हामी भ्रमबाट ग्रसित छौँ। हामी आधा मृत्यु जस्तो निन्द्रा निदाइरहेका छौँ । अब जागौं र केही गरौँ । अझै पनि केही गर्न सकिन्छ।
प्रा डा संग्राैलाले यो उहाँको फेसबुकमा पोस्ट गर्नुभएको विचार हो ।
अघिल्लो लेखमाकोरोना जितेर घर फर्किइन् :प्रसिद्धि
अर्को लेखमादेशमा नै बसौँ, देशलाई बनाऔँ